यदि मलाई क्षयरोग छ भने, म अरू मानिसहरूलाई फैलाउन रोक्न के गर्न सक्छु? – राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र
Publisherबारम्बार सोधिने प्रश्नहरु
यदि तपाईं घरमा आराम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँ संक्रामक हुनुहुन्छ भने, तपाईं नजिकका अरूलाई सुरक्षित राख्न निम्न कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको औषधिको रूपमा निर्देशित गर्नुहोस्। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ!
खाँसी, स्नज, वा हँसिलो हुँदा सधैं आफ्नो मुख ऊतक राख्नुहोस्। बाँधिएको थलोमा राख्नुहोस् र यसलाई सफापूर्वक फ्याँनुहोस्।
आफैलाई आफैबाट अलग पार्नुहोस् र कसैको साथ नजिकको सम्पर्कबाट टाढा जानुहोस्। बेडरूममा सुत्न अर्को परिवारका सदस्यहरू पहिलो हप्ताको लागि।
तपाईंको कोठालाई अक्सर भवनको बाहिरतिर हवाइजानुहोस् (यदि यो बाहिर चिसो छैन)। TB सानो बन्द स्थानहरूमा फैलिन्छ जहाँ हावामा पुग्छ। तपाइँको सञ्झ्यालमा प्रशंसक राख्नुहोस् वायुसेवा उडाउन को लागी टीबी ब्याक्टेरिया देखि भरिएको हुन सक्छ। यदि तपाइँ कोठामा अन्य सञ्झ्याल खोल्नुहुन्छ, फ्यान पनि ताजा हावामा पुर्याउनेछ। यसले संभावनाहरूलाई कम गर्नेछ कि टीबी जीवाणु कोठामा रहनेछ र हावामा सास गर्ने व्यक्तिलाई संक्रमण गर्नेछ।
तपाईंले औषधिहरू लगभग2वा3हप्तासम्म लिनु भएपछि, तपाईं अब अन्य टीबी ब्याक्टेरियालाई फैलाउने सक्षम हुन सक्नुहुन्न। यदि तपाईंको डाक्टर वा नर्स सहमत हुनुभयो भने, तपाईं काम वा स्कूलमा फर्काउने सहित, तपाईंको दैनिक दैनिक तालिकामा फर्कन सक्नुहुनेछ। तर सम्झना, तपाईं आफ्नो डाक्टर वा नर्स द्वारा निर्देशित रूपमा आफ्नो औषधि लिन यदि तपाईं केवल राम्रो हुन्छ।
व्यक्तिको बारेमा सोच्नुहोस् जुन तपाईसँग समय बिताउनु भएको छ, जस्तै परिवारका सदस्यहरू, नजिकका मित्रहरू र सहकर्मीहरू। स्थानीय स्वास्थ्य विभागले टीबी संक्रमणको लागि तिनीहरूलाई परीक्षण गर्न आवश्यक पर्दछ। टीबी विशेष गरी बच्चाहरु र एचआईवी-संक्रमित व्यक्तिहरुको लागि खतरनाक छ। यदि यो व्यक्ति टीबी ब्याक्टीरिया संग संक्रमित हुन्छ भने, उनलाई सक्रिय टीबी रोग को विकास को लागी राखन को लागी दबाइ को आवश्यकता हो।
This Year : 77295
Total Visit : 223687
Total Hits : 1242524